Ukongezwa kwezakhono kwiPlatform yokuHlela yeNkulumbuso ebhengezwe yiPrime Medicine
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukongezwa kwezakhono kwiPlatform yokuHlela yeNkulumbuso ebhengezwe yiPrime Medicine
I-Prime Medicine, Inc., inkampani esekwe ukuba ihambise isithembiso se-Prime Editing, namhlanje ibhengeze ukongezwa kwezakhono kwiqonga layo ngokusekwe kuphando lwenzululwazi lwamva nje.
"Siyavuya kakhulu ukubona ukuphucuka okuzayo okuya kuthi kwandise ubume be-Prime Editing njengendlela yonyango," utshilo uKeith Gottesdiener, MD, CEO we-Prime Medicine. "Olu phuculo, ngaphezulu kwethekhnoloji esele isisiseko yokwakha isiseko, kunokwenzeka ukuba inyuse ukusebenza kwe-Prime Editing, kwaye iyakwandisa iindawo apho i-Prime Editing inokusebenza khona, ngokunokwenzeka sandise ukufikelela kwethu kwizifo ezongezelelweyo ezingekabikho ndlela yokuhlela imfuza ukulungisa into."
Ngale nkqubela phambili intsha yenziwa ngoososayensi bangaphandle, kunye neenzame eziqhubekayo zePrime Medicine liqela langaphakathi lophuhliso, inkampani ilindele ukuqhubela phambili nokwenza uguquko lwe-Prime Editing, ukuchaneka nokusebenza kakuhle. Izakhono ezichazwe kumaphepha akutshanje kwiNdalo iBiotechnology kunye neSeli zinokwenza ukuba kuphuculwe unyango olusebenzayo ngakumbi ngokwenza umsebenzi ophuculweyo wokuhlela.
Inkqubela phambili yokuqala ibandakanya isikhokelo se-Prime RNA esilungisiweyo (pegRNA). Inkulumbuso yokuhlela isebenzisa imolekyuli ye-pegRNA ukufumana ekujoliseni kofuzo kunye nokuyalela ukulungiswa okufunwayo okanye ukuhlela. Kwiphepha elipapashwe kwiNdalo Biotechnology nge-4 ka-Okthobha ka-2021, ababhali abakhokelwa nguDavid R. Liu, omnye wabasunguli bePrime Medicine, babonisa ukuba i-pegRNAs (epegRNAs) zobunjineli ezinokuphuculwa kokusebenza kwenkqubo yokuhlela.
Inkampani ikwalandela iindlela ezichazwe kutshanje zokuphucula ukusebenza ngokuguqula indlela ethile yokulungisa iDNA. Kwiphepha elipapashwe kwiSeli ngo-Okthobha u-14, 2021, ababhali abakhokelwa ngu-Liu kunye no-Britt Adamson bachonge indlela ethile yokulungisa i-DNA, ebizwa ngokuba yindlela yokulungisa ukungalingani, eyandisa ngamandla ukusebenza ngokukuko kokuhlela. Babonakalisile ukuba umsebenzi wokuhlela unokwandiswa amaxesha amaninzi, kwaye iimveliso ezingafunekiyo zinokuncitshiswa kaninzi, ngokumodareyitha indlela yokulungisa ukungalunganga ngeendlela ezininzi.
I-Prime Medicine inamalungelo okurhweba kwi-Broad Institute ye-MIT kunye neHarvard yokusebenzisa i-Prime Editing ngeenjongo zokunyanga abantu, ngelixa oososayensi kunye neenkampani kwihlabathi liphela beqhubeka nokusebenzisa i-Prime Editing ngeenjongo zophando kunye nezinye izicelo.